प्रथम मेयर कप क्रिकेटको उपाधि पशुपतिनगरलाई ! - Mahottari Post
प्रथम मेयर कप क्रिकेटको उपाधि पशुपतिनगरलाई !
१३ फाल्गुन २०७५, सोमबार १८:३८
बर्दिबास नगर स्तरीय प्रथम मेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि बर्दिबास नगरपालिका – ९, पशुपतिनगरले हात पारेको छ ।
सोमवार भएको फाइनल खेलमा बर्दिबास नगरपालिका – २ लाई अल आउट गर्दै पशुपतिनगरले नगर स्तरीय प्रथम मेयर कप प्रतियोगिताको उपाधि हात पारेको हो । खेलमा निकै प्रतिस्पर्धात्मक रहेको खेललाई पशुपतिनगरले आफ्नो पक्षमा पारेको हो ।
पहिलो खेलमा १३६ रनको टार्गेट दिदै आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । दोस्रो खेलमा वडा नम्वर ९ पशुपतिनगरले वडा नम्नर –२ लाई अल आउट गर्दै उपाधि हात पारेको हो । उपाधिसँगै पशुपतिनगरले नगद २० हजार रुपैयाँ हात पारेको छ भने दोस्रो हुने वडा नम्वर – २ ले १० हजारमा चित बुझाएको छ । क्रिकेट प्रतियोगिता समापन समारोहमा बर्दिबास नगरपालिका मेयर विदुर कुमार कार्कीले नगद पुरस्कार र कप प्रदान गरे ।
समापन समारोहमा बोल्दै प्रमुख अतिथि कार्कीले खेल क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए । खेलाडि साथीहरु कला सहितको खेल खेलदिएकोे हुनाले आज धैरै नै हर्सित र खुशी भएको छु । हामीले गत बर्षदेखि मेयर कपको आयोजना गरेकाले खेल हुदै जाँदाखेरी व्याड मिनटन खेल, फुटवल खेल र आज क्रिकेट खेल सम्पन्न भएको छ । यस्तै बर्दिबास नगरपालिकाले थुप्रै खेलको आयोजना गर्ने उनले बताए ।आफ्नो कला देखाउदै मेयर कप अन्तर्गत क्रिकेट सबै भन्दा राम्रो खेल भएकोे हुनाले आउने दिनहरुमा सिंगो महोत्तरी जिल्ला हैन २ नम्वर प्रदेश पनि जित्नेगरी खेल खेल्न जरुरी रहेको बताए ।
खेलबाट बर्दिबास नगरपालिकाको पहिचान बनाई दिन खेलाडीलाई अनुरोध गर्दै भने,‘‘ खेल खेलेर स्वस्थ्य रहने युवालाई बिस्तारै माथी सम्म जोडेर खेललाई व्यवसायिक बनाउने चाहन्छु । बर्दिबासमा रंगशालाको निर्माणको लागि काठमाण्डौ गएर खेलकुद मन्त्रिसंग छिनोफानो गरेर आईसकेका छौ ।
क्रिकेट प्रतियोगितामा बर्दिबास नगरपालिकाका १४ वडाहरु सहभागी थिए । पहिलो मेयर कपको अवसर पारेर बर्दिबास खेलकुद विकास समितिले क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो ।